Ogaden News Agency (ONA) – Bangi kuyaala Adis Ababa oo Ladhacay & khal khal Dhaqaale ku soo Wajahan Itoobiya.
Bangi kuyaala Adis Ababa oo Ladhacay & khal khal Dhaqaale ku soo Wajahan Itoobiya.
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Adis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ladhcay Bangi kamid ah bangiyada ugu waawayn ee gumaysiga Laguna magacaabo Bank of Abasynia oo macnaheedu yahay bangiga Abasiiniya.
Arintan oo imaanaysa xilli uu dalku kujiro marxalad aad ucakiran ayaa sida lasheegayo Afar ilaa lix qof oo hubaysan gawaadhi na wadataa guda ugaleen bangiga waxayna ahayd xilli maalin ah oo ay shaqooyinku sitoosa usocdeen .
Lacagta ladhacay lama sheegin balse waxaa lagu qiyaasay dhawr malyan oo lacagta Itoobiya ah .
Gumaysiga Itoobiya oo ay hogaanka uhayso kooxda EPRDF ayay xaaladu kuxuntahay waxayna arintani dabka kusii hurisay kala shaki iyo is aaminaad daro dhaxdooda ah waxayna kamid tahay burburka siyaasadeed ama dhaqaale ee gumaysiga, iyada oo aan ognahay dhaqaala xumada haysata gumaysiga ayaa waxaa jira khal khal dhaqaale oo dhaliyay madmadoow iyo kala shaki badan